Dowlada Soomaaliya oo lagu wareejiyay Gaadiid iyo qalab looga hortago Waxyaabaha qarxa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
3rd March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Dowlada Soomaaliya oo lagu wareejiyay Gaadiid iyo qalab looga hortago Waxyaabaha qarxaUrurka Midowga Yurub ayaa Dowlada Soomaaliya ugu deeqay kuna wareejiyay gaadiid , qalab la sheegay in looga hortago waxyaabaha qarxa sida Miinooyinka iyo agabyo kale ay ku howlgalaan Ciidamada booliiska iyo kuwa Badda .
Munaasabad kooban oo Dowlada lagula wareejinayay Gaadiidka iyo agabyadan kale ayaa ka dhacday xarunta xalane ee magaalada Muqdisho, waxaana munaasabada kasoo qeyb galay Xubno katirsan Beesha Caalamka iyo Dowlada Soomaaliya.
Wakiilka Midowga Yurub Ee Somaliya, Michele Cervone d’Urso, oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in gaadiidkan iyo agabka kale ee Dowlada ku wareejiyeen loogu tala galay in lagu xoojiyo amaanka guud ee dalka .
Wasiirka Amniga Qaranka, C/risaaq Cumar Maxamed, oo Midowga Yurub ka gudoomay gaadiidka iyo agabyada kale ee lagu wareejiyay ayaa uga mahad celiyay Midowga Yurub taageerada balaaran ay la garab taagan yihiin Dowlada Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya ayaa taageero ka hesha Beesha Caalamka iyo wadamo Arimaha Soomaaliya si dhaw u daneeya ay ku jiraan Wadamo Carbeed , kuwaa oo marar badan Dowlada ugu deeqay gaadiid iyo waxyaabo kale oo ciidanka muhiim u ah.